2017 2018 Porsche Panamera PCM Videos 12.3 Inch Nrụgharị ụgbọala na Igwe ikuku Ngosipụta Ihuenyo Ihuenyo 2017 2018 Porsche Panamera PCM Videos 12.3 Inch Nrụgharị ụgbọala na Ikuku - LFOTPP
Home ngwaahịa 2017 2018 Porsche Panamera PCM Videos 12.3 Inch Nrụgharị ụgbọala na Igwe ikuku Ngosipụta Ihuenyo Ihuenyo
2017 2018 Porsche Panamera PCM Videos 12.3 Inch Nrụgharị ụgbọala na Igwe ikuku Ngosipụta Ihuenyo Ihuenyo
LASER CUT FOR PRECISE FIT. Ọ dịghị mkpa ka ị belata ọnụ ya, n'ihi na ọ na-adabere na 2017 2018 Porsche Panamera Navigation na ihuenyo ihuenyo Control Center.
9H Scratch Resistance: Glass, nke nwere ike ịdị elu nke 9H, dị irè megide ịlụ ọgụ na esemokwu na ihe siri ike iji chebe ihuenyo gị.
Mgbasa ozi Mgbasa ozi akpaaka: Site na mgbasa ozi adsorption, ọ nwere ike na-akpaghị aka na mgbasa ozi na ikpochapu adhesion.
Mgbochi Ọkụ: Nnukwu ihe ọkụkụ na-ekpuchi ihe ọkụkụ, nkwalite siri ike, nwere ike ịmelata ngwa ngwa, belata ncha, ọbụna ma ọ bụrụ na rupture agaghị emepụta mpempe akwụkwọ, dị mma iji ya.
Belata mkpịsị aka: Na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide mmiri, ma na-eguzogide nrụrụ, na-ebelata akara akara na ihuenyo. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ ejiri aka na-etinye na ihuenyo nwere ike imetụta ihuenyo mmetụ.
Mmetụta uche: Nnukwu ihe mmetụ aka, Ìhè na mkpa, dị mma ma dị nro.